Products Factory - China Zvigadzirwa Vagadziri uye Suppliers
5XQS-10 Destoner ye soybean paddy mupunga sesame inobvisa muchina
Destoner inoshandiswa kubvisa inorema density tsvina (matombo, jecha, ivhu zvidhinha) kubva pambishi.
5XZC-3B Muchenesa Mbeu & Grader
Mbeu yekuchenesa & giredhi inova yakakosha uye inonyanya kufarirwa muchina wekuchenesa mumbeu uye zviyo maindasitiri emusika wepasirese, nehunyanzvi hwepamusoro, kuita kwakanaka, kushandiswa kwakakura.
5XZC-7.5DS Muchenesa Mbeu & Grader
Mbeu yekuchenesa & giredhi inova yakakosha uye inonyanya kufarirwa muchina wekuchenesa mumbeu uye zviyo maindasitiri emusika wepasirese, nehunyanzvi hwepamusoro, kuita kwakanakisa, kushandiswa kwakakura.
5XZC-5DH Muchenesa Mbeu & Grader
Movable modhi yakakodzera chirimwa, munda uye kure kure kushanda
Shanda wakazvimiririra akaiswa elevator
Mutengo wakanaka wekuvimbisa kudiwa kwemusika
Kubudirira kwepamusoro uye kukwanisa
Grain Seed Processing Line yepaddy maize barley soya bean
Kushanda kuri nyore
Iyo 5XZ-L gravity separator inoshandiswa inoshandiswa kupatsanura mbeu nemusiyano wegiravhiti chaiwo. Inobvisa granule ine inorema chaiyo giravhiti (sevhu, ivhu zvimedu), uye granule ine chiedza chakananga giravhiti (sembeu yakanyungudutswa, mhodzi dzakakuvadzwa nehonye).
5XZC-3DH Muchenesa Mbeu & Grader